ओलीको प्रस्ताव केसीले स्वीकारे, उपनिर्वाचनमा तालमेल – Khabar Silo
काठमाडौं, ६ कात्तिक । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि तालमेल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्ताव राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्विकारेका छन् ।
उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनाउने सहमति भएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । आज विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको केसीले जनाए ।
काठमाडौं, १८ माघ । न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४९० औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ : १. प्रतिनिधि सभा सांसद पार्वती डिसी चौधरीलाई ठगीको आरोप ! काठमाडौं, १८ माघ । प्रतिनिधि सभाकी सांसद पार्वती डिसी चौधरीमाथि […]